Nangalatra ny entan’ireo niharam-boina… : tratran’ny fitsaram-bahoaka ireo roa lahy teny Ambanin’Ampamarinana | NewsMada
Nangalatra ny entan’ireo niharam-boina… : tratran’ny fitsaram-bahoaka ireo roa lahy teny Ambanin’Ampamarinana
Par Taratra sur 23/02/2018
Soa ihany fa nalaky tonga ny zandary naka ireo jiolahy roa tratra nangalatra teny Ambanin’Ampamarinana, afakomaly. Niharan’ny fitsaram-bahoaka ry zalahy ireto satria nangalatra ny entan’ireo niharam-boina…
Manararao-paty! Nentin-katezerana ny mponina tao amin’ny fokontanin’Ambanin’Ampamarinana ka samy nanala ny fony tamin’ireto jiolahy roa tratran’ny olona nangalatra ny entan’ireo olona niharam-boina vokatry ny takaitra navelan’ilay bolongam-bato nikorisa teny Ampamarinana, ny asabotsy alina teo. Misy amin’ireo entan’ireo niharam-boina no mbola tavela voatsindry ao ambanin’ilay bolongam-bato sy ny korontam-biriky ka tamin’izany no nanararaotra nangalatra ireo entana azo nobataina sy nosokirina ireo jiolahy. Nisy nahatsikaritra ireto olon-dratsy anefa ny mponina ka raikitra ny fifanenjehana sy ny fifanjevoana. Tsy lasa lavitra ry zalahy dia azon’ny fokonolona ka samy nitsaingoka avokoa ny olona izay nahita. Voalaza fa efa naratra mihitsy ry zalahy tamin’ny fotoana nahatongavan’ny zandary naka azy ireo. Tazonina ao amin’ny zandary eny Ankadilalana hanaovana fanadihadiana ireto jiolahy ireto.
Efa voalevina avokoa ireo olona niharam-boina tamin’ity loza voajanahary nampivarahontsana ny olona ity. Manomboka miala tsikelikely ny toeram-ponenany eny Ambanin’Ampamarinana kosa ny ankamaroan’ireo mponina araka ny baiko nomen’ny fanjakana. Mitaintaina hatrany ny mponina taorian’iny loza mahatsiravina iny satria tsy azo antoka intsony ny momba ireo vatobe mitatao eo Ampamarinana ireo. Nanamafy rahateo ny tompon’andraiki-panjakana fa tsy azo apoaka amin’ny alalan’ny dinamita ireo vato ireo fa tsy maintsy ireo mpamaky vato efa matihanina amin’izany no hanatanteraka ny famakiana ireo vato ahina hamoa-doza indray.